အရသာရှိလှတဲ့ Desserts မျိုးစုံရရှိနိုင်တဲ့…. – FoodiesNavi
Shwe Pu Zun Cakes and Cold Drinks ဆိုတာလူတိုင်းသိပြီးသားဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မှာဆိုအချိုအစားအစာတွေမှာနာမည်အကြီးဆုံး၊အအောင်မြင်ဆုံးဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖာလူဒါကောင်းကောင်းသောက်ချင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ဆနွင်းမကင်း၊ရွှေကျီးကောင်းကောင်းစားချင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ဒိုမီနိုကောင်းကောင်းသောက်ချင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် အရသာရှိတဲ့ဆိုင်ကောင်းကောင်းစဉ်းစားရင်လူတိုင်းအားလုံးပြေးမြင်ကြတာရွှေပုစွန်ဆိုင်ကိုပဲပြေးမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်မှာအလှူလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ဘုန်းကြီးဆွမ်းကပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊လက်ဆောင်ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်မုန့်ဝယ်မယ်ဆိုရင်ရွှေပုစွန်ဆိုင်မှာပဲသွားဝယ်တာလူတော်တော်များများအကျင့်တစ်ခုလိုဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဆိုင်မှာသန့်ရှင်းလတ်ဆတ်ပြီးအရသာရှိတဲ့အစားအစာတွေရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်၊ဝန်ဆောင်မှုကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်၊စားသုံးသူတွေငွေပေးရတာနဲ့တန်အောင်စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုရွှေပုစွန်ဆိုင်ကအောင်မြင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်အောင်မြင်နေသလဲဆိုတာအခုဆိုဆိုင်ခွဲစုစုပေါင်းသုံးဆိုင်ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာနှစ်ဆိုင်နဲ့နေပြည်တော်မှာတစ်ဆိုင်ဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းကြုံရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဝင်စားလို့ရအောင် Shwe Pu Zun Cakes and Cold Drinks ဆိုင်တွေရဲ့လိပ်စာလေးတွေကိုဖော်ပြပေးမယ်နော်..
Shop No(1) in 1978 at No 246/248 , Anawrahta Road, Lanmadaw Township, Yangon,Myanmar….
Shop No(2) in 2005 at No 14(A),Minnandar Road, Dawbon Township, Yangon, Myanmar…..
Shop No(3) in 2010 at Oaktarathiri Myo, Near Ingyin Pan Wyne, Nay Pyi Taw
ညနေဘက်အေးအေးဆေးဆေးမိသားစုပျော်ပျော်ပါးပါး relax လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သူငယ်ချင်းတွေအေးအေးဆေးဆေး စကားပြောချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် Shwe Pu Zun Cakes and Cold Drinks ထိုင်ရင်းစိတ်အပန်းဖြေလို့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ရွှေပုစွန်မှာ သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်ပြီးရွှေပုစွန်ခြံထွက် Fruits နဲ့ ကော်ဖီမှုန့်တွေကိုလည်းဝယ်ယူလို့ရပါတယ်။ ရွှေပုစွန်မှထွက်ရှိတဲ့အသီးအနှံ့တွေကလတ်ဆတ်ပြီးဓာတုဆိုးဆေးမပါတဲ့အတွက်ကြောင့် လက်ဆောင်ပေးပေး၊ ကိုယ်တိုင်ဝယ်စားစား၊ နေထိုင်မကောင်းသူတွေပဲစားသုံးသုံးထိခိုက်မှုမဖြစ်စေပါဘူး။ ပြီးတော့ ရွှေပုစွန်တွင်မင်္ဂလာခန်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် မင်္ဂလာဆောင်မယ့်မောင်မယ်တွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။
အစားအစာတွေသန့်ရှင်းလတ်ဆတ်ရုံသာမက အရသာပိုင်းမှာလည်းတကယ့်ကိုလတ်ဆတ်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့အတွက်ကြောင့် Shwe Pu Zun Cakes and Cold Drinks ကိုရောက်ရင်ဝင်သုံးဆောင်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ ငွေပေးရကျိုးနပ်အောင်တကယ့်အရသာရှိတဲ့ဆိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ ရရှိနိုင်တဲ့အစားအစာတွေက လူကြီး၊လူငယ်မရွေး၊ လူမျိုး၊ဘာသာမရွေးသုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်။ အရသာရှိလှတဲ့ကိတ်နှင့်အအေးမျိုးစုံရရှိနိုင်တဲ့အတွက် အချိုပစ္စည်းတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်သူတွေအတွက် တကယ့်ကိုခံတွင်းတွေ့စေမယ့်နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။
Shwe Pu Zun Cakes and Cold Drinks Facebook Page : www.facebook.com/shwepuzun/
In Restaurant Guides Tagged various kinds of cakes, various kinds of desserts, various kinds of drink Leaveacomment